Semalt Inotsanangura Maitiro Aungaita Kushandura Makombiyuta Kuti Ugadzire Zviri Mukati
Chinyorwa chirevo chinoshandiswa kubvisa zvinyorwa kubva kune dzimwe nzvimbo. A tool scraper inoshanda nekutumira mhinduro chaiyo kune webhusaiti uye inoshandisa data ye HTML. Kushandura kweWebhu inzira inoshandiswa zvakanyanya mumisika yezvemari uye muInternet marketing industry.
Nzira yekushandisa web scraper
Web scraper inosarudza uye inojekesa zvatinoda mukati mebhuku uye inoshandura data yaunoda mumagadzirirwo akaoneka nemitemo. Zvirongwa zvekutsvaga kweWebhu zvinoshanda pakutsvaga data yakadai semavhidhiyo, tsanangudzo yemagetsi, zvinyorwa, nemifananidzo - aryle stepp.
Uri kushanda pakudhonza nhamba kubva panzvimbo dzisina kukodha? Kushandisa webhu ndiyo nzira yokuenda nayo. Sezvo mutengesi wemurima wezvemari, unogonawo kugadzira web web scraper uchishandisa mabhuku akasiyana-siyana anotsigira matanho ako ekutengeserana.
Nekutsvaga webhu, iwe unogona kubatanidza nyore nyore zvigadziriswa uchishandisa mimwe mitauro yakadai seRuby, PHP, uye Python. Zvisinei, mamwe matambudziko angamira pakati pako uye web scraping. Izvi zvinetso zvinodzivirira webmasters kubva kushandisa web scrapers zvinobudirira. Heano mamwe matambudziko okuchengeta mupfungwa.
Zvichida iwe uri wekutanga kana kuti purogiramu, uchitevera murayiridzo wekudzidzisa maitiro ekushandisa web scraper ndekukurudzira. Somuenzaniso, kusakwanisa kushandiswa nenzira yakakurudzira kunoita kuti zvive zvakaoma kuti scrapers iverenge uye iparadzise data yako.
HTML5 dzakagadzirwa nzvimbo
Nhamba dzakawanda dzemasayithi dzakagadzirwa ne HTML5, chinhu chinoita kuti zvive zvakaoma web
Nzvimbo dzakasiyana-siyana dzekushandura
Mazano ekushandisa web web scraper pa Zvimwe zvitsuwa
Kuwana ruzivo rwakananga kubva pawebsite kunogona kunge kwakanyanyisa. vari kushanda pakudhonza nheyo kubva panzvimbo duku, funga kugadzira nekugadzirisa zvinyorwa zvako.Kurangarirai kuchinja uye kuisa huwandu hwehuwandu hunoenda ku 100%.
Mazano ekudhonza dhidhii uchishandisa web scrapers
Ita chirongwa chinogona kugamuchira HTML script
Ongorora nodhi dzinosanganisira deta nekuongorora DOM yako sarudzo
Gadzira node-processor kuti ubudise mashoko
Chengetedza yako yekutanga ferenhesheni yekuunganidza deta mumagadzirirwo anogadzirika
Dhadhi yehurumende muenzaniso wakanaka kwazvo we HTML code. Iyi code inowana URL yewebsite sekupinza uye inoratidza dheedhi dzakanyatsoratidzwa sekubuda. Dhin system inoshanda pakugadzirisa muverengi kuti agadzirise deta yako nekugadzirisa pane zvaunoda kuita. Kana muverengi wesangano asingakwanisi kuverenga URL, URL inotumirwa kune mumwe muverengi.
Pakutanga, kukurudzira mhinduro yekurudziro inokurudzirwa kugamuchira zvikomba pamusoro pezvinyorwa zvinyorwa. Mhinduro inokurudzira inobatsira vatengesi nevablogi kuti vape zvinhu zvakanakisisa uye zvitsva. Sokutumira webmaster, nguva dzose iwe unotanga kuisa pahuwandu hwehutano.
Mukushambadzira, mugumo unoruramisa nzira. Kubva pashoko vatanga, funga kuongorora dambudziko nematambudziko achazoita kuti iwe muInternet mushandirapamwe. Sarudza hurongwa hwekucheka hunogona kunge hunyanyisa kune vanotanga. Usarega masango achikanganisa kambani yako yekutsvaga webhu. Zvinyorwa ne Upwork kuti uve nedzidzo dzakawanda dzokuti ungashandise sei web scraper uye uwane huwandu hwakanaka hwehuwandu.